यस्ता पनि छोरा ? बुवाको मृत्युपछि सबै सम्पत्ती छोरालाई दिएर एक्लै बसेकी आमालाई उनकै झुपडीमा गएर छोराले सडकमा लतारे कुकुरले देखायो वफादारी – My Blog
यस्ता पनि छोरा ? बुवाको मृत्युपछि सबै सम्पत्ती छोरालाई दिएर एक्लै बसेकी आमालाई उनकै झुपडीमा गएर छोराले सडकमा लतारे कुकुरले देखायो वफादारी
No Comments on यस्ता पनि छोरा ? बुवाको मृत्युपछि सबै सम्पत्ती छोरालाई दिएर एक्लै बसेकी आमालाई उनकै झुपडीमा गएर छोराले सडकमा लतारे कुकुरले देखायो वफादारी
एजेन्सी । तपाइँले फिल्महरुमा कुकुर आफ्ना मालिक प्रति धेरै वफादार भएको देख्नुभएको छ। तर यस्तै केहि वास्तविक जीवन मा पनि देखीएको छ। भारत तमिलनाडुको नमक्कल शहरमा यस्तै दृश्य देखिएको छ। जहाँ एउटा छोराले आफ्नी आमालाई सडकमा ल्याएको छ । कुकुरले उसलाई बचाउन खोज्दैछ।
आजकल यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा धेरै भाइरल बनिरहेको छ। घरकी श्रीमती नल्लम्माल पतिको मृत्युपछि पोन्नेरीपट्टीमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। उनले आफ्नो जग्गा छोराको नाममा गरिसकेकी थिइन् । उनी आफ्नो जीवनयापनका लागि मजदुरको रुपमा काम गर्छिन्। मनरेगा योजना अन्तर्गत, जब काम उपलब्ध हुन्छ, जब उनीहरु त्यहाँ जान्छन्, उनीहरुको जीवन चल्छ।
नल्लम्मालका छोरा शानमुगम अब आफ्नी आमा, उसको घर र उसको कमाई पनि चाहन्छन्। नल्लम्मालले थाहा पाए की आमाले मजदुरी गरेर कमाएको तीन लाख रुपैयाँ बचाएकी छन् । उनले त्यो पैसा आफ्नै घरमा राखेकी छन् भन्ने थाहा पाएपछि छोरा आमाको घरमै पुगे । आमाले पैसा दिन नमानेपछि शानमुगाम आफ्नी आमा लाई बाटो मा तान्दै थिए र उनी बाट घर को चाबी लिने कोशिष गर्दै थिए ।
आफ्नो मालिक ति आमालाई छोराले तानेको देखेपछि उनले पालेको कुकुरले महिलालाई बचाउने कोशिष गरिरहेको छ । यस प्रयासमा कुकुरले धेरै पटक शानमुगामलाई आ क्र म ण समेत गर्यो । तर उनले आमावाट साँचो लिए र पैसा समेत लिएर गए । तर घाइते आमालाई त्यसै छोडिदिए । नलमललाई पछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरियो। तर, जब घटनाको भिडियो भाइरल भयो, पुलिसले शानमुगामलाई पक्राउ गर्यो । जबकि उनकी फरार श्रीमती को खोजी जारी छ।
← फेरी अस्ताए यी चम्किला तारा ! स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको कारण उनको अस्पतालको आइसियुमै निधन → विप्लव समुहले दल्यो पशुपति क्याम्पसका तत्कालिन अध्यक्षलाई मोसो, विज्ञप्ती जारी गर्दै भन्यो यिनी जस्ता अरुलाई छोड्दैनौं (विज्ञप्ती सहित)